AMISOM oo Dowlada Kacodsatay bixinta Magta Ciidamada uga geeriyooday dagaalada ka dhacay Somalia | Wardoon Wardoon.net - Somali News
AMISOM oo Dowlada Kacodsatay bixinta Magta Ciidamada uga geeriyooday dagaalada ka dhacay Somalia
Wararka naga soo gaarayo xubno ka tirsan Dowlada Soomaaliya ayaa sheegaya in Madaxa waaxda Ururka Midowga Afrika u qaabilsan Taageerida Hawlgaladda Nabadda Bam Sivuyille uu Dowlada Soomaaliya uu hordhigay Codsi.
Codsiga ayaa la sheegayaa inuu ahaa mid salka ku haya bixinta ama ka qeybqaadashada magta Ciidamada AMISOM uga geeriyooday dagaalada ka dhacay Somalia.
Codsiga qoraalka ayaa dhigaaya in Dowlada Somalia ay u furan tahay inay ka qeybqaadan karto magtaasi, iyadoona looga baahan yahay inay bixiso 20%.
Codsiga ayaa waxaa lagu xusay in Dowlada Somalia ay xiligaani kasii bogsaneyso burburka iyo Khasaarihii kasoo gaaray dagaalada ay la galeen Maleeshiyaadka Al-shabaab ee ka arimin jiray inta badan dalka Somalia.
Mr Bam Sivuyille, ayaa Dowlada Somalia ku bogaadiyay inay ku dhiirato bixinta magta Ciidamada Geeriyooday ka hor inta aysan Ciidamada AMISOM isaga bixin dalka Somalia.
Bam Sivuyille oo qoraalkaasi ku saxiixnaa ayaa waxa uu Dowlada Somalia fursad u siiyay in si nidaamsan oo uu wakhti u dhexeeyo ku bixin karto lacagahaasi, iyada oo la kaashaneysa Beesha Caalamka si loo muujiyo in Somalia ay gaareyso isku filnaan.
Codsigaani ayaa waxa uu muujinayaa in Ciidamada AMISOM ay dalka Somalia ku joogaan shaqo u abuurida Ciidamada laga soo kala xulay Dowladaha Africa oo ay ugu horeeyan Ciidamada Ugandha iyo Burundi.
Dhaqaalaha Dowlada Federaalka ah ee Somalia ayaan gaarsiisneyn heer ay ku bixiso Magdhaw, iyadoona Taliska guud ee AMISOM uu qorsheynaayo in magtaasi la gaarsiiyo 70,000 oo Dollar, halka ay haatan ka tahay 50,000 oo Dollar.
Ma jirto wax jawaab ah oo ka baxay Xafiisyada Dowlada Federaalka oo ay arintaani Khuseyso.